Saturday September 07, 2019 - 11:52:30 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
Xasan Muxumud Cali Gudoomiyaha Degmada Buurdhuubo ayaa sheegay in dadka kunool deegaano hoostaga Degmada ay la dhibaateysan yihiin Xaalado bani aadamnimo oo soo wajahday.
Gudoomiye Xasan waxa uu tilmaamay in dhibaatada heysata oo muddo soo jiitameysay ay sababtay in dadka deegaanka ay barakacaan.
Xasan waxa uu sheegay in dadkaan ay ku tiirsanaayeen Wabiga, balse markii uu biyo yareeyay ay dhaxleen dhibaatooyin nololeed.
Dowladda Federaalka, Dowlad Goboleedka Jubbaland, Qurba joogta, Ganacsatada, Hay’adaha Samafalka iyo cid waliba oo gacan ka geysan karta waxa uu ka dalbaday in ay gurmad deg deg ah siiyaan dadka Buurdhuubo.
Gudoomiyaha Buurdhuubo Xasan Muxumud Cali waxa uu sheegay in muddo 11-sano dadka degmadaas aysan helin gurmad toos ah, maadaama 6-sano oo kamid ah ay maamulayeen Al-Shabaab oo ay joojiyeen hay’adaha samafalka, iyo 5-sano oo ay go’doon ku hayaan degmada.
Shalay waxaa Magaalada Nairobi lagu soo gaba-gabeeyay shir looga hadlayay xaaladda bani aadamnimo ee dalalka xubnaha ka ah Urur Goboleedka IGAD.
Waxa ay isla garteen wakiilada ka kala socday Wadamada ku bahoobay IGAD in ay la socdaan xaalad waliba oo deg deg ah, maadaama digniin is daba joog ah ay soo dirayaan Hay’adaha Samafalka